Imo yenqwelomoya: yintoni, yeyantoni kunye nendlela yokuyenza isebenze kwaye ingasebenzi - VidaBytes | LifeBytes
Encarni Arcoya | 30/05/2022 08:27 | Ukuhlaziywa ukuba 31/05/2022 08:34 | Ulungiso
Njengomgaqo jikelele, sikhumbula imo yenqwelomoya xa sithatha inqwelomoya kuba siyazi ukuba, ngexesha lokubhabha, kufuneka sikhuphe iselula okanye siyibeke, njengoko besixelela ngenkqubo yeedilesi zoluntu, "imo yenqwelomoya".
Kodwa yintoni kanye kanye? Yenzelwe ntoni? Unxiba kwaye ukhulule njani? Ngaba akhona amaqhinga ngokusetyenziswa kwayo? Ukuba nawe uyazibuza, siya kukuphendula yonke.
1 Yintoni imo yenqwelomoya
2 Isetyenziselwa ntoni imo yenqwelomoya?
2.1 ukulala ngcono
2.2 Gcina ibhetri
2.3 Bhala kuWhatsApp ungabonwa
2.4 Qala ngokutsha imidibaniso
3 Uvula nokucima indlela yenqwelomoya
3.1 Vula kwaye uvale kwi-Android
3.2 Vula kwaye uvale i-iPhone
3.3 Vula kwaye uvale kwikhompyuter
Yintoni imo yenqwelomoya
Imo yenqwelo moya eneneni luseto onalo kwisixhobo sakho esiphathwayo, nangona sikwakhona kwiitafile, iilaptops, iikhompyuter... Injongo yoku kukuqhawula imidibaniso engenazingcingo, nokuba yi-WiFi, idatha yefowuni, ifowuni okanye isignali yomyalezo okanye iBluetooth.
Oku kuthetha ukuba ifowuni ayinakusetyenziswa ngokupheleleyo, ekubeni awuyi kukwazi ukufowuna okanye ukufumana iifowuni, okanye i-SMS kunye nezicelo aziyi kusebenza. Kuphela abo bangasebenzisi i-Intanethi banokusebenza, kodwa intsalela iya kunqunyanyiswa de le modi yenziwe ingasebenzi.
Isizathu sokuba ibizwe ngolu hlobo kungenxa yokuba yayibhekiselele kuthintelo olwalukho kwiminyaka eyadlulayo apho xa uhamba ngenqwelomoya wawungenako ukusebenzisa iselfowuni yakho kunye nabavelisi, ngenjongo yokungacimi iselfowuni, bayila olu seto.
Nangona namhlanje kuyaziwa ukuba akukho nto yenzekayo ngokungayisebenzisi kwiinqwelomoya, bayaqhubeka beyincoma, yaye bade bayinyanzele. Nangona kunjalo, ekubeni i-2014 inokuqhutyelwa ngaphandle kokuyivula (evunyelwe yi-EASA okanye iKhomishini yaseYurophu). Gcina ukhumbula ukuba, ngaphandle koku kunokwenzeka, ziinqwelomoya ezinelizwi lokugqibela malunga nokuba yintoni enokwenziwa kwaye ayinakwenziwa kwiinqwelomoya.
Isetyenziselwa ntoni imo yenqwelomoya?
Ngokuqinisekileyo uye wasebenzisa imo yenqwelomoya ngaxa lithile, kwaye hayi ngokuchanekileyo ukubhabha. Kwaye kukuba, nangona ukusetyenziswa kwayo okuphambili kukule, eneneni inokusebenzisa okuninzi imihla ngemihla. Ezinye zezona zixhaphakileyo zezi zilandelayo:
Ukukhumbula ukuba siya siqhagamshelwa ngakumbi kwizixhobo (iselula, ithebhulethi, ikhompyuter), umzimba wethu usabela kuso nasiphi na isandi esiphuma kubo, ude uvuke ezinzulwini zobusuku nje ufuna ukwazi into efikileyo.
Ibe loo nto isenza buhlungu ubuthongo bethu.
Kungenxa yoko, ukusebenzisa imo yenqwelomoya yindlela yokumisa iselfowuni ngaphandle kokuyicima kwaye ikuvumela ukuba ube neeyure ezimbalwa zokuzola kunye nokuphumla ukuba umzimba wakho uya kukubulela.
Olunye usetyenziso oluqhelekileyo lwemowudi yenqwelomoya kukugcina ibhetri. Ukuba ne-intanethi, ibluetooth, kunye noqhagamshelo oluninzi oluvulekileyo ngokuqhubekayo kwaziwa ngokukhupha ibhetri. Ukuba ushiye kancinci, ukuyivula kunokukunceda ukuba uyigcine, nangona inengxaki kwaye oko kukuba ungashiya ifowuni ngaphandle konxibelelwano olunokwenzeka..
Into engaphantsi kakhulu iya kuba kukususa idatha kunye ne-WiFi ukuze ingaxhumi.
Bhala kuWhatsApp ungabonwa
Oku mhlawumbi yenye yezona zisetyenziswa ngabaninzi, kwaye Ibandakanya ukuvula imo yenqwelomoya ukuze ukwazi ukubona amazwe okanye ukuphendula imiyalezo ngaphandle kokuvela "kwelinye icala". 'Ukubhala' xa siphendula.
Oko kuthetha ukuba unokuthatha ixesha lakho ukuphendula, okanye uthathe nje ixesha ngaphandle kwe-app ngaphandle kokufumana imiyalezo.
Qala ngokutsha imidibaniso
Lusetyenziso oluncinci olwaziwayo, kodwa lusebenza kakhulu xa uqhagamshelo kunye nefowuni yakho inika iingxaki (awunaso isignali, iyasikwa, ungeva kakuhle, njl. njl.). Ukuba oko kuyenzeka, ukubaUkuvula nokucima imo yenqwelomoya kwimizuzu emihlanu kunganceda ukuseta ngokutsha kwaye uqalise ngokutsha imidibaniso.
Kwiimeko ezininzi, oku kunceda ukulungisa iingxaki.
Uvula nokucima indlela yenqwelomoya
Ngoku ekubeni unolwazi oluthe kratya malunga nemo yenqwelomoya, lixesha lokuba wazi ukuba ungayenza njani isebenze kwaye uyenze ingasebenzi kwiselfowuni yakho, nokuba yi-Android okanye i-iPhone.
Inyani yeyokuba ilula kakhulu kuba ihlala ikulawulo olukhawulezayo lwefowuni. Kodwa ukuba awuzange uyifune ngaphambili kwaye awuyazi ukuba iphi, sikwenza kube lula kuwe.
Vula kwaye uvale kwi-Android
Siqala ngeefowuni ze-Android. Inyani yeyokuba kukho iindlela ezininzi zokuyivula (kwaye ke ngoko uyenza ingasebenzi) ngoko ke unokhetho:
Ukusebenzisa iqhosha lokuvala. Kukho iifowuni ezithi, xa ucofa kwaye ubambe iqhosha lamandla, likunika imenyu encinci phambi kokucima ngokupheleleyo, elinye lamaqhosha ibe lelo nqwelomoya. Leyo yimo yenqwelomoya kwaye ngonqakrazo ungayisebenzisa (kwaye uyenze ingasebenzi ngokufanayo).
Kuseto lwe-Android. Ukuba ufaka iqhosha leseto kwifowuni yakho, unokuba ne-injini yokukhangela, ukuyikhangela ukuba ayiveli. Kodwa ngokuqhelekileyo iya kuvela: phezulu kwimenyu okanye kwi-WiFi kunye neenethiwekhi zeselula. Kufuneka nje uyivule kwaye yiloo nto.
kwibha yesaziso. Ukuba wehlisa ibha yesaziso (uthatha umnwe wakho ukusuka phezulu ukuya ezantsi) kwaye apho, kulawulo lofikelelo olukhawulezayo, uya kuba neqhosha le icon yenqwelomoya ukuyivula (okanye ukuyivala).
Vula kwaye uvale i-iPhone
Kwimeko apho ifowuni yakho iyi-iPhone, kuya kufuneka wazi ukuba uya kuhlala uyifumana ifana ne-Android, oko kukuthi:
Kwisethingi yemenyu yefowuni yakho, nokuba ekuqaleni okanye ukujonga kwi-WiFi kunye noqhagamshelwano.
Kwiziko lolawulo lwe-iPhone yakho.
Vula kwaye uvale kwikhompyuter
Ngaphambi kokuba siphawule ukuba zininzi iilaptops kunye neekhompyuter ezineqhosha lemowudi yenqwelomoya. Kwimeko yekhompyuter yenqaba, ukusetyenziswa kunqabile kakhulu, ngaphaya kokusetha kwakhona uqhagamshelo onalo, kodwa kwiilaptops inokusetyenziswa ngakumbi, ngakumbi ukuba uhamba kwaye usebenza nayo ngexesha lohambo.
Ukuyivula nokuyivala kuya kuxhomekeka ekubeni usebenzisa iWindows, iLinux okanye iMac kwikhompyuter yakho, kodwa phantse kuzo zonke uya kuyifumana ngokulula ngokuyikhangela kwi-injini yokukhangela ephambili okanye ngokufumana i icon ngenqwelomoya (efana naleyo ikwiselfowuni yakho).
Ewe kunjalo, khumbula ukuyenza ingasebenzi emva koko, ngaphandle koko, kungakhathaliseki ukuba uzama kangakanani ukudibanisa kwinethiwekhi kamva, ayiyi kuvumela.
Njengoko unokubona, indlela yenqwelo-moya, nangona ekuqaleni yayiyilelwe iinqwelo-moya, namhlanje isebenzisa izinto ezininzi ngakumbi. Kufuneka nje unike ithuba kwaye uzame. Akukho nto yenzekayo ixesha elincinci ngaphandle kweselula.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubomi beByte » Ulungiso » Imo yenqwelomoya: yintoni, yeyantoni kwaye yenziwa njani kwaye yenze ukuba ingasebenzi